Dayniile: Taliyihii Nabadsugidda oo qarax lagu dilay
Home WARARKA Dayniile: Taliyihii Nabadsugidda oo qarax lagu dilay
Muqdisho-(Berberanews)-Degmada Deyniile ee gobolka Banaadir ayaa qarax miino nooca dhulka lagu aaso ah lagu khaarajiyay Taliyahii Nabadsugida degmada Deyniile Cabdishakuur Raage xili oo ku sugnaa duuleedka degmadaasi.
Taliyaha qaraxa miino lagu khaarajiyay ayaa la sheegay inuu saarnaa gaadhi, waxaana qaraxa lala beegsaday xili ay howlgalo ka wadeen duuleedka degmada Deyniile.
Waxaa sidoo kale qaraxa ku dhintay saddex askari oo ka mid ahaa ilaalada taliyaha dhintay sida ay warbaahinta u sheegeen dad goobjoogayaal ah, waxaana sidoo kale dhaawac uu soo gaadhay dad goobta ka agdhawaa kuwaas oo dhaawacooda la geeyay mid kamid ah Isbitaalada Magaalada Muqdisho.
Al-shabaab ayaa sheegatay masuuliyada qaraxa miino ee lagu dilay taliyahii Nabadsugida degmada Deyniile iyo 11 kale oo askari oo la socotay si ay kusoo daabaceen boggaha ay ku leeyihiin baraha bulshada ee Internet-ka.
Previous articleSomaliland: Wasaaradda Deegaanka oo qabatay 3 midh oo harrimacad ah
Next articleWe’re partnering with DP World to chart a stronger course for African trade around the world